» `म नै हो गडफादर` : बिराज भट्ट
७ चैत्र २०७५, बिहीबार १४:५३
उताको क्रेडिट चाहि एक जना मान्छेलाई मैले दिनै पर्छ । किन कि आजको दिनसम्म म उहाँसंग जोडिएको छु । एउटै ब्यानरमा रहेर उहाँको दशौं फिल्म म रेगुलर गर्दैछु ‘गुण्डा’ भन्ने फिल्म जुन फ्लोरमा जान लागेको छ । ईन्डियाको ईतिहास हेर्यो भने १२ देखि १३ फिल्म मात्र छ सवभन्दा बढी एउटै आर्टिष्टसंग कम्बिनेशन भा’को जुन अमित जी (अमिताभ बच्चन) को हकमा देखिन्छ र हामीले पनि ३ चारवटा फिल्म गर्‍यौं भने त्यो रेकर्डमा चाहि हामी पुग्छौ होला ।
रमाकान्त प्रसाद, उहाँ पहिला डिष्टिब्युटर हुनुहुन्थ्यो अहिले प्रोड्यूसर । उहाँसंग २००८मा पहिलो फिल्म गरेको थिएँ ‘लागले राजाजी’ त्यो फिल्म त्यो टाईमको सिल्भर जुब्ली मनाउन सफल भयो र त्यो सफलतापछि लगातार दशौं फिल्म ‘गुण्डा’को तयारीमा जुन फिल्मको सुटिङ जनवरी १४ तारिख देखि हुदैछ ।
भनेपछि ब्यानर साँझेदारी खोज्नु भा’हो ?
धेरै भएछ नेपाली फिल्म खेल्नु भा’ छैन । खेलेका कति फिल्म रिलिज हुन बाँकी छन् याद छ ?
मेरो हकमा पहिला पनि र अहिले पनि आफ्नो बारेमा एक दिन चाहि यस्तो दिन आउछ भनेर बडा सिओर थिए । त्यसकारण पछि उहाँहरु नै मसंग डेट माग्न आउदा मलाई आश्चर्य चाहि लागेन । जुन कुरा भोजपुरी फिल्म खेल्ने प्रसङ्गमा पनि लाग्छ । किनभने भोजपुरीमा पनि पहिलो फिल्म खेल्ने वित्तिकै म धेरै सप्राईज थिईन र यहाँ आएर भनेको थिएँ अब म उतै ब्यस्त हुन्छु भनेर जुन आज मिट गरिरा’छ ।
खेल्ने नै हो । प्रोडक्सनको कुरा आफ्नै ठाँउमा छ । अझ भनौ फिल्म निर्माण गर्ने कुरामा त्यति क्लियर भएको देखिरा’ छैन हाम्रो फिल्ममेकरहरु । फेरी जो आयो उसको फिल्म गर्ने भन्ने पनि हैन तर राम्रो फिल्म छ भने चाहि किन नगर्ने ? ब्यस्तता त उता पनि छ त्यसैले राम्रो चाहि गर्ने पक्षमा छु ।
स्पेशल केही पनि छैन । दाल भात तरकारी नै हो । बरु अलिकति एक्सरसाईजमा भ्याएसम्म ध्यान चाहि दिईराख्या छु । पब्लिकले तपाईको उमेर थाहा पाउन पनि खोजिराख्या छन्, कति पुग्नु भो भन्न मिल्छ ?
स्रोत : फिल्मी खबर